I-Stony Brook University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Admissions Data
I-Stony Brook University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Stony Brook GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
I-Stony Brook i-University of GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO oQinisekisa ukungena. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
I-Stony Brook University, esinye sezikolo ezininzi kwiNyuvesi yaseNyuvesi yaseNew York, iyakwamkelwa ngokukhethekileyo ngenani lokuwamkela i-41%. Ukwamkelwa kuya kwenzeka ukuba kukhethwe ngakumbi xa izithembiso zeProvensium Excelsior Programme ziyenzeka. Ukuze ubone indlela olinganisa ngayo nabanye abafake izicelo, ungasebenzisa le sixhobo samahhala ukusuka kwiCapepex ukubala amanani akho wokungena.
Ingxoxo yeStony Brook's Admissions Standards
Njengenye yeyunivesithi ekhethiweyo kwinethiwekhi ye-SUNY, iSyunivesithi yaseStrown iyancama ukuvuma abafakizicelo abanamabanga kunye namanqaku okuhlolwa asemgangathweni angaphezu kwemilinganiselo. Kwigrafu ngasentla, amachashaza ahlaza okwesibhakabhaka kunye aluhlaza amelela abafundi abamkelekileyo. Uninzi lwabafakizicelo abaphumeleleyo banomlinganiselo ophakamileyo wesikolo "B +" okanye bhetele, ii-SAT izikolo ezi-1150 okanye ngaphezulu (i-RW + M), kunye ne-ACT ezingamanani angama-24 okanye angcono. Umlinganiselo "we-A" kunye ne-SAT ngaphezu kwe-1200 kukunika ithuba elihle lokufumana ileta yokuwamkela evela eStony Brook. Qaphela ukuba iStony Brook iyincoma kodwa ayifuni uvavanyo lwe-SAT lokubhala.
Qaphela ukuba kukho amachaphaza abomvu (abafundi abachasiweyo) kunye namachashaza aphuzi (abafundi abadibeneyo) baxutywe kunye nohlaza okwesibhakabhaka kunye nohlaza okwesibhakabhaka phakathi kwegrafu. Abanye abafundi abanamabanga kunye namanqaku okuvavanya ayejoliswe kwiSyunivesithi yaseStony akazange aphumelele ukungena. Kwiphepha le-flip, phawula ukuba abafundi abambalwa bamkelwe ngamanqaku okuvavanya kunye namanqaku athile ngaphantsi kwesiqhelo. Oku kungenxa yokuba inkqubo yokumkelwa kukaStony Brook isekelwe kwidatha engaphezulu.
Iyunivesithi iyamkela isicelo esiqhelekileyo, isicelo se- SUNY, kunye nesicelo sobumbano kunye neStony Brook ineenkqubo zokumkelwa ngokubanzi . Abantu baseStony Brook bayamkeleka kwiinkqubo zezikolo zenu eziphakamileyo , kungekuphela kwamabanga akho. Impumelelo kwiiklasi zokulungiselela iikholeji njenge-Baccalaureate yamazwe ngamazwe, ukuPhakanyiswa okuPhezulu, kunye neNhlonipho kunokomeleza kakhulu isicelo. Okona kuncinci, iStony Brook iya kufuna ukubona ukuba abafaki zicelo baye bazalisa ikharityhulam engundoqo ebandakanya i-science eyaneleyo, izibalo, isiNgesi, ulwimi, kunye nezenzululwazi kwiklasi zenzululwazi. Kwakhona kuhlobene nekhosi, uStony Brook uyakuthanda ukubona amabanga aphezulu kunokuba ahambe phantsi.
Naluphi na isicelo okhetha ukuyisebenzisa ukusebenzisa iStony Brook, kuya kufuneka ubhale inqaku elinayo . IYunivesithi nayo inomdla ekufundeni ngemisebenzi yakho yangaphandle- abantu abamkeleyo bafuna ukubona ubungqina bobunkokeli kunye neetalente ezinxulumene nokufunwa kwee-non-academic. Ekugqibeleni, bonke abafake izicelo kufuneka bangenise ileta yesinconywa . Qhubeka ukhumbule ukuba abafake izicelo kwiKholeji ye-Honors kunye nezinye iiprogram ezizodwa ziya kuba neemfuno ezongezelelweyo zesicelo.
Ukuze ufunde kabanzi malunga neYunivesithi yeStony Brook kuquka neendleko, uncedo lwezezimali, amazinga okugqwesa, kunye neenkqubo ezifundiswayo, qiniseka ukuba ukhangele iprofayili ye - Stony Brook University .
Ukuba uthanda iStony Brook, Unako ukuthanda ezi zikolo
Akumangalisi ukuba abafake izicelo kwiYunivesithi yaseStony Brook bafaka izicelo kwezinye iifunivesithi kwi-network ye-SUNY. IYunivesithi yaseBinghamton kunye neYunivesithi yaseAlbany kakhulu ithandwa phakathi kwabafaki sicelo beStony Brook. Ukuba uhlola iimyuvesi ezizimeleyo, qiniseka ukuba ukhangele iHofstra University kunye neSyunivesithi yaseSyrause .
I-Virginia State University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Inkcazo yomtshato kwi-Sociology
Le miQulelo yoLuthando olulahlekileyo yomoya-moya iya kubetha
Isikhokelo sokufumana ukutshatyalaliswa kweenyawo zaseTshayina
Indlela yokukhusela i-Attack Shark
I-Bone Marrow kunye noPhuhliso lweeNgceni zeGazi
Iingcaphuno malunga neNtsholongwane
60 I-Great Horror Movie Posters